I-Brontophobia: yini, yiziphi izimpawu zayo nokuthi ungayiphatha kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngubani ongakaze esatshiswe yisiphepho, isiteleka sombani noma umsindo omkhulu wokuduma kwezulu. Kuvame kakhulu ukushaywa lapho umbani ushaya ngokuseduze noma lapho ukuduma kwezulu kuduma kakhulu kuyo yonke indlu. Kodwa-ke, kukhona ukwesaba okuvame kakhulu ebuntwaneni mayelana umbani nokuduma kwezulu Kuyaziwa njenge brontophobia. Akuyona enye into ngaphandle kokwesaba umbani nokuduma umuntu anakho kusukela ebuntwaneni nokuthi, uma welashwa ngesikhathi, kungahle kungakhuli kahle ebudaleni.
Kulesi sihloko, sizokutshela ngokuningiliziwe ukuthi yini i-brontophobia, ukuthi inezimpawu zini nokuthi yini engenziwa ukuyiphatha kahle.
1 Kuyini i-brontophobia
2 Izinkinga zokukhathazeka
3 Izimpawu ze-brontophobia
3.1 Izimpawu zomzimba
3.2 Izimpawu zokuqonda
3.3 Izimpawu zokuziphatha
4 Ungayiphatha kanjani i-brontophobia
Lesi sifo sinokukhathazeka futhi sihlobene nokwesaba kwe-phobic kwe- izivunguvungu. Umbani nokuduma kwezulu nakho kunikeza ukwesaba kumuntu. Isibonelo, ngomsindo olula wokuduma, umuntu one-brontophobia angaqala ukuthuthumela ngokwesaba, azizwe kabi, azizwe ekhungathekile, futhi ngokuvamile azizwe kabi. Imayelana ne- ukwesaba okuyihaba, okungenangqondo nokungalawuleki lokho kukhula kube yimpendulo yokukhathazeka isikhathi ngasinye lapho umuntu echayeka kulawa ma-ejenti emvelo.
Njengomphumela wempendulo yokukhathazeka, ukugcinwa kokuziphatha, ukwenza kanye nokuziphatha okuhlukile kuvame ukuvela okwenziwa ngenhloso yokugwema lesi simo esidala ukwesaba kumuntu. Lo muntu ufuna ukubalekela isimo esiphazamisayo ngokushesha okukhulu.
Ngokuvamile I-brontophobia imvamisa iqala ukubonakala eminyakeni yobudala. Ukuze izingane zesabe iziphepho kuyinto engokwemvelo ngokuphelele. Kodwa-ke, uma lokhu kwesaba kukhula futhi kukhula kukhulu ngokuhamba kwesikhathi, kungashintsha kube yi-phobia yangempela. Uma izivunguvungu zivamile endaweni lapho kuhlala khona umuntu one-brontophobia, le phobia ingaphazamisa kakhulu ukukhula kwempilo yalowo muntu. Cabanga ukuthi umuntu owesaba iziphepho usendaweni lapho kunezivunguvungu ezi-1 noma ezi-2 ngenyanga. Uzolokhu evezwa ukwesaba okungenasidingo ngeqiniso elilula lokungamphathi kahle kusukela esemncane.
Kunezindlela zokwelashwa ezisebenza ngempumelelo kubantu abanalesi sifo.
Ukwazi ukuthi une-brontophobia, Izinkinga zokukhathazeka ziyisifo esihle okufanele usibheke. Uphawu oluqonde kakhulu noma umphumela we-brontophobia ukubona ukuthi umuntu ophethwe yilo uhlala ezama ukugwema noma abalekele izimo ezihlala njalo lapho esaba khona. Isibonelo, ngokumane ubone amafu amnyama, zama ukuthuthela kolunye uhlangothi lapho kungekho khona. Ukucabanga nje ukuthi kuzoba nesiphepho kumenza athuke kakhulu, acasuke futhi asabe.
Lezi yizici eziyinhloko zomuntu one-brontophobia:
Lo muntu uzoba nakho ukwesaba ngokweqile futhi okungalingani kwesimo okuso.
Ukwesaba onakho akuvamisile ukuba nomqondo omningi. Akunangqondo noma kusekelwe emibonweni engalungile ngokuphelele. Imibono enjengokuthi umbani ungashaya ngaphakathi endlini, ukuthi umsindo wokuduma ungaphula amafasitela, njll.
Ubani obhekene nalokhu kwesaba akakwazi ukukulawulaNoma ngabe unomuntu oseceleni kwakho ozokuxhasa futhi akutshele ukuthi akukho okubi okuzokwehlela.
Imvamisa, umuntu one-brontophobia uzama ngamandla ukubalekela izimo lapho ezoba nokwesaba okungenangqondo okunje.
Uma lo muntu engakwelashwa ukwesaba, kungahlala unomphela futhi kulethe imiphumela emibi kakhulu.
Esokuqala nesivame kakhulu yisifo sokukhathazeka esishiwo ngenhla. Lokhu akusho ukuthi bonke abantu bazokhombisa ukwesaba ngendlela efanayo. Umuntu ngamunye unendlela yakhe yokuziveza futhi siyabona, ngendlela ejwayelekile, ukuthi yiziphi izimpawu eziyinhloko:
Ukwesaba nokukhathazeka okutholwayo kuvame ukunikeza uchungechunge lwezinguquko nokuguqulwa emzimbeni. Sihlangane no:
Ukuphefumula okukhulu ngeyunithi yesikhathi.
Umuntu uzizwa ephelelwa umoya.
Isicanucanu noma ukuhlanza
Ukulahlekelwa ukwazi ezimweni ezimbi kakhulu.
I-Brontophobia ayinazo nje lezi zimpawu zomzimba lapho singabona khona ngaphandle ukuhlupheka komuntu lapho sibona ukuthi kunesiphepho esizayo noma esizayo. Kukhona nezimpawu zokuqonda. Ngokwesibonelo, Umuntu othintekile angaba nemibono engalawuleki futhi angabi nomqondo omncane ngengozi yangempela edalwa yiziphepho. Imiphumela yesimo sesimo sezulu icatshangwa ngendlela eyinhlekelele. Kholwa noma ungakukholwa lokho, wesaba nokulahlekelwa yingqondo yakhe futhi angazi ukuthi uzokwenza kanjani okunengqondo. Ngalesi sizathu, uhlala ufuna ukugwema izimo lapho uchayeka esivunguvungwini.
Lezi zimpawu ezimbili zangaphambilini ziholela ekuziphatheni okuhluke ngokusobala kwabanye abantu. Okukhomba kakhulu ukweqa kulesi simo esesabekayo noma ukubaleka lapho isikhuthazi sesivele sivele. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu engakwazi ukubalekela isiphepho, bazozama ukwenza zonke izinhlobo zezinto ukuze bangacabangi ngakho noma bazame ukukhohlwa ukuthi bangaphansi kwesiphepho
Ungayiphatha kanjani i-brontophobia
I-Brontophobia ingaba yisifo sokumosha, ikakhulukazi uma umuntu ophethwe yiso eqhubeka echayeka kulezi ziphepho ngenxa yesimo sezulu esivumayo. Ukwelashwa kokuqonda nokuziphatha kuthola imiphumela emihle ekwelapheni le phobia.
Lapho uqala ukwelashwa, uzama ukwenza uchungechunge lwamasu ngenhloso yokuqeda izimpawu ezi-3 esizibonile phambilini. Ngokuhlelwa kabusha kwengqondo, izinkolelo ezingenangqondo mayelana neziphepho zingashintshwa ukuze umuntu anciphise ezinye izimpawu. Uma umuntu azi ukuthi isiphepho asiyona ingozi ngaleso sikhathi, angahle athule. Isayensi isiza kakhulu kulokhu.
Ngakolunye uhlangothi, izindaba ezingezinhle ngokushaya kombani kubantu zidala ukwesaba okukhulu kubantu. Ngesikhathi sokwelashwa, kufanele wazi ukuthi ungazichaza kanjani ngaphandle kokuzishiya noma uqambe amanga ngakho.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-brontophobia.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-Brontophobia